Ny fampianarana sary tsara indrindra miaraka amin'ny fihenam-bidy tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Ny fampianarana sary tsara indrindra miaraka amin'ny fihenam-bidy tsara indrindra
The Bundle Co dia orinasa iray manokana amin'ny famoronana taranja an-tserasera. Ao anatin'izany no ahitantsika ireo fampianarana noforonin'ireo mpanoratra malaza ao amin'ny sehatr'izy ireo. Ka taranja kalitao àry izy ireo. Na dia miavaka amin'ny fihenam-bidy lehibe hitantsika aza izy ireo. Satria ny vidin'izy ireo dia ambany lavitra noho ny vidiny mahazatra. Amin'ity tranga ity dia mamela anay ny orinasa a tolotra tsara amin'ny fifantenana taranja sary.
Noho izany, ho an'ireo mpampiasa izay nieritreritra ny handray fampianarana sary izy ireo, vintana tsara io. Satria mahita taranja tsara amin'ity fampiroboroboana vaovao an'ny The Bundle Co. Ary koa, fampiroboroboana vonjimaika izany. Noho izany dia tokony ho mailaka ianao hahazoana ny fihenam-bidy
Azonao atao mividy ilay bundle miaraka amina taranja sary 21 amin'ny vidin'ny iray ao anaty rohy izay navelanay fotsiny
Ny fampianarana atolotra amin'ny Internet dia amin'ny teny anglisy. Na dia ho an'ny mpampiasa fahalalana anglisy aza dia tsy ho sarotra izany. Ary koa, amin'ny fotoana rehetra, ao amin'ny Mazava ho azy fa olona miresaka amin'ny fakantsary amin'ny fomba miadana izy. Azonao tsara izay lazain'izy ireo. Ny taranja The Bundle Co rehetra dia misy fitaovana fanampiny koa.
Matetika izy ireo dia manana PDF miaraka amina lahatsoratra sy fanazavana. Mora kokoa ny manaraka azy, miampy mora ny mandika azy amin'ny Internet tsy misy olana raha ilaina izany. Ka tsy ho olana amin'ny fotoana rehetra ny fiteny raha manaraka ireo fampianarana ireo ianao.
1 Fampianarana sary amin'ny vidiny tsara indrindra ao amin'ny The Bundle Co.
2 Fampiroboroboana vonjimaika ao amin'ny The Bundle Co.
Fampianarana sary amin'ny vidiny tsara indrindra ao amin'ny The Bundle Co.
Lohahevitra takiana fatratra amin'ny taranja an-tserasera ny fakana sary. Noho izany, avy amin'ny The Bundle Co dia mitondra a avelany izahay miaraka amina taranja mahaliana vitsivitsy momba an'io lohahevitra io. Ny zavatra tsara indrindra dia ny misy karazana fampianarana rehetra ao anatin'ny sehatry ny sary. Noho izany, na olona tsy dia manana traikefa ianao, matihanina na olona iray izay tia be sary, dia misy làlana mahaliana.
Misy totalin'ny fampianarana vaovao 21 misy inona no hitanao eto. Na dia azo atao aza ny misafidy azy ireo tsirairay avy, ny fampiroboroboana avelany antsika avy amin'ny The Bundle Co dia raha vidiana ny fampianarana rehetra. Amin'izay, ny fihenam-bidy misy dia goavana. Noho izany, mety ho safidy tsara ny mandinika.
Inona avy ireo fampianarana azo atao amin'ity tranga ity amin'ny tranonkala? Ity ny lisitry ny fampianarana feno, miaraka amin'ny tena vidiny, raha toa ka te hifanaraka amin'izy ireo ianao:
The Capture Course, nataon'i Lindsay Davenport ($ 147 matetika)
Fampianarana sary an'ny iPhone, nataon'i Haus of Layne ($ 49 matetika)
Ny momba ny jiro ratsy rehetra, nataon'i Justin 8 Mary (49 $ matetika)
Fianarana fiankohofana azo ampiharina, nataon'i Abby Grace (vidiny tany am-boalohany $ 97)
Ny lalam-panambadiana, nataon'i Julie Paisley ($ 229 tsy tapaka)
Fianarana antenaina mamy, nataon'i The Milky Way (vidin'ny fividianana mahazatra $ 189)
New Photography 8 Family Photography, nataon'i Sandra Coan ($ 99 matetika)
Saripika kely miaraka amin'ny findainao, nataon'i Katie Lamb (vidiny tany am-boalohany $ 69)
Boudoir Photography Guide, nataon'i Jen Huang (vidiny $ 78.99 tany am-boalohany)
Master Photography Photography Food, nataon'i We Eat Together ($ 199 matetika)
Mazava ho azy momba ny Travel Photography, nataon'i Gary Arnat (sarany $ 295)
Go-Pro Shooting Cour, nataon'i Chubby Cheek Photography (vidiny $ 60 tany am-boalohany)
Product Styling course, nataon'i Jennifer Carroll ($ 247 matetika)
Fampianarana 101, nataon'i If | Vita (vidiny $ 229)
Fampidirana Flat Lay, nataon'i Rebecca Yale (vidiny $ 147 tena izy)
Fototra amin'ny sary sarimihetsika, nataon'i Nancy Ray (vidiny tany am-boalohany $ 547)
The Hybrid Photography (Film + Digital) Guide, nataon'i Tenth 8 Grace (350 $ matetika)
Ahoana ny fomba famandrihana ny mpanjifa amin'ny portfolio kely, nataon'i Abby Waller (47 $ matetika)
Manamboara orinasam-pandraisana sary mahomby, nataon'i Kylee Ann (vidiny voalohany $ 299)
Ny Mazava ho azy momba ny varotra amin'ny olona, ​​nataon'i Jenni Maroney (vidiny tany am-boalohany $ 237)
Fitifirana ho an'ny famoahana, nataon'i Belle Lumiére Magazine ($ 145 matetika)
Ireo no taranja 21 misy amin'izao fotoana izao. Afaka misafidy misaraka amin'izy ireo ny mpampiasa raha sanatria misy iray mahaliana anao fotsiny. Na dia mamela antsika amin'ny tolotra mahavariana aza i The Bundle Co hividy ny fonosan'ny fampianarana rehetra. Fihenam-bidy hampiala anao amin'ny finoana.
Tianao ve? Ianao dia afaka vidio ity bundle ity amin'ity rohy ity ary manomboka manatsara ny kalitaon'ny sarinao dieny izao.
Fampiroboroboana vonjimaika ao amin'ny The Bundle Co.
Raha efa nanao matematika ianao, ny fanofana ireo fampianarana 21 ireo dia mitentina 4,016.99 $. Na dia vidiny mirindra aza izany raha jerena fa taranja natolotry ny matihanina izy ireo, be loatra izany. Saingy, The Bundle Co dia mamela antsika amin'ity fampiroboroboana manokana ity.
Manome antsika ny mety ny fivarotana fifanarahana ireo taranja 21 amin'ny ankapobeny mandoa 98.50 dôlara fotsiny (86 euro amin'ny tahan'ny fifanakalozana) ho azy ireo. Azonao atao ny manararaotra an'io fotoana mahavariana io. Fampianarana sary matihanina latsaky ny $ 100. Tsy misy fisalasalana, tsy misy tranokala hafa manome antsika izany fahafaha-manao izany.
Na dia vetivety aza ity fampiroboroboana ny fampianarana sary ao amin'ny The Bundle Co ity. Satria azo atao ny manakarama azy ireo amin'ity sarany manokana ity hatramin'ny rahampitso 12 Febroary ho azy. Fahafahana lehibe ho an'ireo mpampiasa te hianatra bebe kokoa momba ny sary. Aza adino ity fotoana ity hanana ireo fampianarana ireo. Afaka vidio rehetra amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Ny fampianarana sary tsara indrindra miaraka amin'ny fihenam-bidy tsara indrindra
Ny lohahevitra ofisialin'i Chrome dia misy ankehitriny avy amin'ny Chrome Web Store